Abakhi beTag & Label | I-China Tag & Label Factory & Abahlinzeki
Ukuphepha Kwezingubo AM 58KHz Amathegi we-Alarm Sensors Tag Tag-Acute Tag
I-Acute Pencil Tag inguqulo emfushane yamathegi wepensela athandwayo. Ikhoyili ye-ferrite yesilonda inika amandla iMini-Stylus, enikeza ukusebenza okuqhathaniswayo ne-Wave Tag. Le thegi ingasuswa ekuthengisweni nganoma iyiphi i-magnetic detacher.
Inombolo Yemodeli: I-Acute Pencil Tag (No.018 / AM)
Uhlobo: AM Tag
Ubukhulu: 60 * 19 * 14MM (2.36 ”* 0.75” * 0.55 ”)
Umbala: Mpunga / Mhlophe / Mnyama
Ukuphepha Kwezingubo AM 58KHz Amathegi we-Alarm Sensors-Mini Ipensela Tag
I-non-Adhesive Hard Tag engasebenzi, evuselelekayo iletha ubuchwepheshe be-AM EAS bokusebenza okuphezulu ekwakhiweni kwethegi elukhuni.Ukuthola idizayini yesimanje, engamelani nokwehlulwa nokusetshenziswa okulula / ukususwa lapho kuthengiswa khona, le thegi ye-ferrite ilungele ukuvikela izimpahla ezahlukahlukene.
Inombolo imodeli: Mini Ipensela Tag (No. 001 / AM)
Ubukhulu: 45 * 19 * 14MM (1.77 ”* 0.75” * 0.55 ”)
EAS Anti-Theft 4040mm RF Soft Label Isuphamakethe-4040 Ilebula
Lawa makhi angamadivayisi nje amancane kagesi aqukethe i-chip ne-antenna, okuvame ukwenziwa ukuvimbela ukweba ezitolo. Ngama-RF tag, kuzwakala umsindo omkhulu lapho othile ezama ukuphuma esitolo ngaphandle kokukhokhela umkhiqizo kumuntu wakhe. Amathegi we-RF anayo ezinye izinhlelo zokusebenza eziningi futhi.
Inombolo imodeli: RF 4040 Ilebula (No.4040 / RF)
Uhlobo: RF Label
Idizayini Yangaphambili: Nude / Mhlophe / Ibhakhodi / Kwenziwe ngentando
Imvamisa: 8.2MHz ± 5%, 9.5MHz ± 5%, 10.5MHz ± 5%
I-Hot Melt Adhesive: Henkel
I-RF 8.2Mhz EAS Mini Tag Isikwele Esimnyama Nge-Pin Retail Security Tag-Mini Square
Uhlelo oluxubene nezinjongo lwayo yonke inhloso ye-RF, umaki wokuphepha we-Electronic Article Surveillance (EAS), i-8.2MHz Rectangular Mini iyinsika yabathengisi abaningi ukuvimbela ukweba ezitolo. Ifomu layo elincanyana nokwakheka okulula kukwenza ukunamathisele ezintweni ezibushelelezi futhi kube lula ngenkathi kuvikeleka izinto ngaphandle kokuphazamisa ulwazi lwe-shopper, ukuthengisa noma ukukhushulwa komkhiqizo ..
Inombolo imodeli: Mini Square Tag (No. 001 / RF)
Uhlobo: RF Tag
Isitolo Sezingubo EAS System Anti ukwebiwa Magnetic Security Tag Hard Tag-Ipensela Tag nge umsila wenkomo
Ihlanganisa imisila yenkomo kanye nomaki kokukodwa. Umaki ophelele wezesekeli ezincane. Akunasidingo sokuthenga omaki bobabili kanye nemisila yenkomo ngokwehlukana.Ukuthola ukwakheka kwanamuhla, ukumelana nokwehluleka nokusetshenziswa / ukususwa okulula lapho kuthengiswa khona, le thegi ye-ferrite ilungele ukuvikela okuthengiswayo okuhlukahlukene.
Inombolo Model: Ipensela Tag ne Imisila yenkomo (No. 008 / AM)
Ubukhulu: 55 * 13MM (2.16 ”* 0.51”) ene-135mm umsila wenkomo
I-RF 8.2Mhz EAS Middle Dome Tag NgePin Yokuthengisa Okuthembekile Tag-Middle Dome
Le thegi yenzelwe izinhlelo ze-8.2MHz RF. Izinyathelo zethegi zingu-2.13 ″ (54mm) ububanzi futhi ziza ngoMnyama. I-Middle Dome Tag ihlanganisa amandla amakhulu wokuthola ngomklamo obukekayo. Kubukeka kukuhle futhi kwesimanje ngenkathi ngasikhathi sinye kungomunye wamathegi anzima kakhulu kulabo abazoba amasela ukuzama ukunqoba. Idizayini yohlobo lwe-clamshell isho ukuthi akukho kuvulwa kokuzama ukusika umaki noma ukuvula ukuvula. Sincoma kakhulu le thegi.
Inombolo imodeli: Middle Dome Tag (No.016 / RF)
Ubukhulu: φ54MM (-2.13 ”)
EAS izingubo ezishibhile am anti-theft digital epaper tag tag AM DR label soft tag
Ilebuli yeshidi le-AM inikeza ububanzi obuhlukile, ubuzwe, ukumelana nokuphazamisa, ukuthola. Le Label Sheet iletha ukusebenza okuphezulu kwe-the-line nokuvikelwa kwempahla okuphezulu lapho unamathela kuzimpahla.
Inombolo Yemodeli: AM DR Soft Label
Thayipha: AM Label
Ubukhulu: 45 * 10 * 2MM (1.77 ”* 0.39” * 0.079 ”)
Umbala: Ikhodi yebha / emhlophe / emnyama
I-RF 8.2Mhz EAS R50 Tag Enabathengisi Bokuphepha Bokuthengisa Abathengisi Tag-R50
Ukusebenza okuhle, inani nokusebenza kahle - ithegi ka-R50 ithegi yokuphepha ethandwa kakhulu esetshenziswa emgwaqweni ophakeme. Ithegi enzima kakhulu, esetshenziselwa ukuvikela izingubo, nezinhlelo zokuphepha kwesitolo se-RF 8.2MHz.Le thegi inikeza ukutholwa okuphezulu (1.8m) phakathi kwe-antenna yohlelo lwe-EAS (izisekelo).
Inombolo imodeli: R50 Tag (No.019 / RF)
Ubukhulu: φ50MM (-1.97 ”)
I-RF 8.2Mhz EAS X50 Tag Enabathengisi Bokuphepha Abathengisi be-Pin-X50
Ama-Round Tags noma amathegi e-RF asetshenziselwa ukuvikela izingubo. Zitholwa ngenxa yezimpondo ze-RF ezifakwe ekuphumeni. Kutholakala ngezindlela ezahlukene nobukhulu obuhlukile. Zenziwe ngepini yobude obuhlukahlukene futhi zivulwa ekuphumeni nge-universal text detacher.
Inombolo imodeli: X50 Tag (No.022 / RF)
EAS Anti-Theft 4040mm RF Soft Label Supermarket-R42 Ilebula
Ilebuli yeRF 50x50mm iletha ukusebenza okuthembekile nokuvikelwa kokuthengiswa usebenzisa ubuchwepheshe beRadio Frequency (RF). Ikhophi ephrintiwe ebusweni belebuli yakhelwe ukwazisa abangaba ngamasela ukuthi izinto zivikelwe ilebula lezokuphepha nokuthi ukuphatha izimpahla ezivikelwe ngendawo yokuthola kuzokwethusa uhlelo lwezisekelo.
Inombolo imodeli: RF 5050 Ilebula (No.5050 / RF)
I-RF 8.2Mhz EAS Mini Dome Tag enePin Security Retail Tag-Mini Dome
IMini Dome Tag iyahambisana nohlelo lokulwa nokweba i-8.2 MHz EAS RF. Lona umaki onamathiselwe kumkhiqizo okufanele uvikelwe, kusetshenziswa isipikili noma iphini. Iphini libanjwa yithegi, kusetshenziswa isiphethu kazibuthe.
Inombolo imodeli: Mini Dome Tag (No.015 / RF)
Ubukhulu: φ45MM (-1.77 ”)
EAS Anti-Theft 4040mm RF Soft Label Isuphamakethe-5050 Ilebula
Isimiso esithile sokusebenza kwelebula elithambile ukuthi: faka umtshina we-elekthronikhi lapho uphuma enxanxatheleni yezitolo, unamathisele ilebula noma unamathisele ilebula elilukhuni lokulwa nokweba kumkhiqizo, bese ufaka ilebula elithambile kumkhiqizo noma usebenzise isikhiya sokuvula ukwenza umkhiqizo dlulisa umtshina emnyango ngokushelela. Uma uthatha izimpahla ezinamalebula athambile noma amalebula aqinile ngaphandle kwenkokhelo, lapho udlula umtshina, umtshina uzakwethusa, ngaleyo ndlela avikele intshisekelo yezomnotho emakethe.